Ifektri yokuqasha kanye nabaphakeli | Okukhazimulayo
Transparent Screen LED
Esobala Iphosta LED
Isibonisi esiguquguqukayo se-LED
Display elungiselelwe i-LED
Isibonisi se-Fine Pitch esihle
Isibonisi se-Indoor ye-Indoor
Isibonisi Sangaphandle se-LED
Station & Isikhumulo sezindiza
Indawo egcina amagugu esizwe
Amakhasino Nemikhakha Yezemidlalo
Esobala poster LED
Isiqinisekiso / Service
Abahlukile, imicimbi ashukumisayo zonke babe ngento eyodwa: baqala nge mbono omkhulu. Yimaphi amathuluzi isilinganiso osisebenzisayo ukuze siqiniseke ukuthi umcimbi wakho eshukumisayo, uhlanganyela, kanye abangasoze balulibala kanjani labo abakhona? LED sokuqasha isikrini isiqophi ingenye izindawo ezanda ngokushesha bukhoma ukukhiqizwa futhi umcimbi izimboni. Ukungeza ubuntu futhi ubukhulu umcimbi wakho akukaze kube lula. Ukubonisa LED nezimo ngokwemvelo futhi kungenziwa amisiwe ukukhonza eziningi imisebenzi ezahlukene amancane, aphakathi nendawo, kanye setups ezinkulu. Kanye yethu eziqashisayo inethiwekhi ukukhiqizwa abalingani, ekhazimulayo LED Uhlale ekulungele ukusiza uthatha ukukhiqiza kwakho bukhoma umcimbi ezingeni elilandelayo nge LED ukubonisa ubuchwepheshe.
Njengoba umkhakha aqhubeka aguquka futhi ubuchwepheshe ukukhiqizwa lomcimbi eba, RadiantLED sika esande umkhiqizo imigqa izixazululo engapheli for zonke izidingo zakho yokudala, anezibonisi curvable LED, ukucupha lokudala, nokuboniswa ukuthi kungenziwa eklanyelwe cishe noma yimuphi usayizi ongayicabanga. Nakuba abantu abaningi naka LED isiqophi odongeni ngokuqashisa ukuba wusizo ekhonsathini kanye umcimbi zomculo izilungiselelo, iqiniso wukuthi ekhombisa LED ingasetshenziswa ezihlukahlukene bukhoma umcimbi zimo. Eqinisweni, izinkampani eziningi abaphendukela sokuqasha LED zezikrini ngazo ukuhweba show amadokodo, imicimbi ezinkampani kanye imihlangano, kanye ukusakazwa umabonakude bukhoma nama tapings.
Ekhazimulayo LED inendlela oluphelele zokuhlanganisa LED sokuqasha isikrini isiqophi ku wamanje zokukhiqiza imiklamo umcimbi wakho. Singasiza udala show yakho kusukela ekuqaleni noma ngena nganoma yingasiphi ukukhiqizwa design inqubo ukuqinisekisa izinga top-tier nasekubulaleni ewuketshezi LED isiqophi odongeni ukuqasha kwakho kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. iminyaka yethu nakho Basiphathise amalungelo siziqonde ngokuphelele ayimi ubunjalo umkhakha ukukhiqizwa ukuzijabulisa. Lapho izinkinga noma imibuzo edinga ukuphendulwa mayelana ividiyo eqashiwe amasistimu ethu LED, ekhazimulayo LED amaklayenti amahhala ukusizakala emhlabeni wonke, oluphelele 24/7 ukusekela uhlelo lwethu.
Isikhathi Iposi: Mar-28-2019
Isitezi 3, Isakhiwo i-D, i-Yisong Ecological Technology Park, uNo99 Jiejiabao Road, Umgwaqo weBaoan, iShenzhen City, China
Sishayele manje: +86 755 83193425